Izinkinga zabadlali abalimele bakaHunt | Scrolla Izindaba
Izinkinga zabadlali abalimele bakaHunt
Imvula ayini kodwa kuyathela kumqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt.
Umdlali ohamba phambili, uKhama Billiat akekho, kanti uHunt usenkingeni enkulu njengoba i-Chiefs ikuqinisekisile ukuthi uBilliat ulimale kanzima.
“UBilliat unethambo lomlenze eliqhekekile futhi uzophuma izinyanga ezimbili,” kusho i-Chiefs ekhasini layo le-Twitter.
Ngaphandle kokungatholakali kukaBilliat uma Amakhosi evakashele AmaZulu emdlalweni weligi kusasa, uHunt uzophinde abe ngaphandle komgadli wakhe wase-Colombia uLeonardo Castro olimele.
Uhlobo lokulimala lukaCastro noma ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani aluzange luvezwe yikilabhu.
Njengoba bobabili la badlali uBilliat noCastro bephumile, uHunt uzobheka umgadli ohole phambili wesizini edlule uSamir Nurkovic ngamagoli, kodwa uHunt usasebenza ngokuqina komzimba kaNurkovic njengoba ebuya ekulimaleni okumenze waqala isizini yamanje.
Ngasohlangothini oluhle, umdlali wasesiswini uKearyn Baccus ubuyile ekulimaleni futhi uyatholakala ukuze akhethwe emdlalweni wabo noSuthu.
Ngazo zonke izingqinamba uHunt abhekene nazo kwi-Chiefs, umdlalo wakusasa ngeke ube lula kuye – nokuyindaba yesizini yaMakhosi kuze kube manje.
Ubhekene naMaZulu avuselelwe ngaphansi komqeqeshi uBenni McCarthy. Iqembu seliqoqe amaphuzu amane emidlalweni yalo emibili edlule. Emdlalweni wabo wokugcina ngeSonto ekuhambeni ne-Bloemfontein Celtic baqhamuka ngemuva bezokweba iphuzu.
Abakaze bathi isimo sokufa sizosiza uma behlangana ne-Chiefs edangele. Amakhosi abheke kulo mdlalo njengoba ehlulwe ngamagoli amabili eqandeni ngabafana basekhaya boSuthu i-Maritzburg United.
Lokho kwehlulwa kushiye i-Chiefs ihlezi endaweni ye-14 ngamaphuzu ayisikhombisa kuphela emidlalweni eyisishiyagalolunye.
Lo mdlalo uzodlalelwa enkundleni yezemidlalo i-Jonsson Kings Park, eThekwini ngehora lesithathu ntambama.